လမ်း 14: ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
သူတို့ကစင်ပေါ်မှာကြှနျုပျကိုမွငျ, သူတို့က "လူကိုကကောင်လေးတစ်ယောက်" ကြိုက်တယ်
သူတို့ဟာသူတို့အပျေါမှာသီခငျြးမြားကစား hit, သူတို့အတွက်ရပ်တည်ချက် clapping
သူတို့ကြိုက်, "ငါသည်သူတို့ကိုသင်အများကြီးရော်ဘာခညျြနှောငျအတွက် stacks တယ်အလောင်းအစား"
သူတို့ကိုခဲ့, ငါ၏ရန်သူများကိုတိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတည်ငြိမ် trenches
ထိုအခါငါမပိုသူကနိမ့်နိမ့်ငါ့ကိုဆောင် သွား. မတိုက်နိုင်သည့်အခါ
သူကအနိမ့်ငါ့ကိုဆောင် သွား., ငါကဝန်မခံနိုငျသိ
သူတို့က "သင်တို့ကိုငါအနိုင်ပေးပြောနေတာကိုနားထောငျပေမယ်ငါသည်သင်တို့၏ဆုံးရှုံးမှုမွငျ" ကိုကြိုက်
သင့်ရဲ့စိတ်ရွှင်လန်း box ထဲမှာ fit ပါဘူးသောဝိရောဓိ Hacking ကို
သငျသညျခြေအိတ်ရဲ့ဒီစုံတွဲ၌ကျင်လည်ကုန်မှီတိုင်အောင်သင်သည် '' နားမလညျစေခြင်းငှါ,
အဆိုပါ Victor သတ္တမဝင်ထွက်ခြင်းအနိုင်ရသောတဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး
yeah သူတို့သည်သင်၏လက်ကိုရိုက်, သင်တို့သည်ငါတို့၏သေဆုံးရိုက်
အိုးသညျယရှေု, အောင်မြင်သော (x2)
ကင်မရွန် • ဒီဇင်ဘာလ 8, 2014 တွင် 12:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ဤမျှလောက်များစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကဒီသီခငျြးကိုမှားဖို့သီချင်းစာသားကိုဆည်းပူးခဲ့ကြ. haha, ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်သူတွေကိုပို့စ်တင်ဘို့ကျေးဇူးတင်စကား! အမြဲတမ်းဒီသီခငျြးကိုချစ်ပြီးကိုယ့်ကိုတကယ်သင်ထဲသို့သွင်းထားစိတျနှလုံးအလေးမြတ်. ဒါဟာတကယ်ဘဝမှာလက်ျာအချိန်တွင်ငါ့ကိုအားပေးတယ်နှင့်ယခုငါယေရှု၌အောင်ပွဲဖို့မြျှောလငျ့နိုငျကိုသိရ, မသက်ဆိုင်ငါ၏အအားနည်းချက်များကိုနှင့်ရုန်းကန်မှုများ၏. ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ, ခရီးစဉ်ကို!
ဆာဗေးဒေါ Garduno • ဒီဇင်ဘာလ 8, 2014 တွင် 4:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါတကယ်ကျောဇာတ်လမ်းအပါအဝင်ဒီသီခငျြးကိုဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်, ဘယ်လို gawvi ကြွင်းသောအရာမှသငျသညျရရန်ကြိုးစားနေစဉ်သင်ဤသီချင်းရေးသားခဲ့သည်, ငါဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းကငါသည်လည်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှင့်အတူလှန်ခဲ့ကြ 19 နယ်စပ်ဒေသ narcoleptic လက္ခဏာတွေနှင့်အတူအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်တိုက်ခိုက်နေကြပြီ old.I yrs. ငါရယ် 29 ယခု, ငါသည်ဤသီချင်းမှတဆင့်စစ်တိုက်တော့အရာရာနဲ့ငါ့သီခငျြးမြားနှငျ့ယုံကွညျခွငျး၏အကြှနျုပျ၏ကြေငြာဖြစ်လာသည်. ငါသည်သင်တို့နှင့်သင်တို့၏ဂီတကိုအသုံးပြုပြီးအတှကျဘုရားသခငျကိုကြေးဇူးတငျ. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျညီအစျကိုကောင်းကြီးပေး. ငါသူသည်သင်၏ခရီး၌သငျသွေးထွက်ဆက်လက်ဆုတောင်းပဌနာ.
သူ Ming • ဒီဇင်ဘာလ 8, 2014 တွင် 6:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
BobbieRobinson78 • ဒီဇင်ဘာလ 10, 2014 တွင် 11:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂုဏ် • ဒီဇင်ဘာလ 12, 2014 တွင် 9:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာကဒီသီခငျြးကိုကိုချစ်. ငါအနှစ်အတိတ်စုံတွဲတို့အတွက်ကျောက်ကပ်ရောဂါတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာနှင့်မကြာသေးမီကအစားထိုးစာရင်းကိုပေါ်တွင်တင်တယ်. ဤသီချင်းတိုက်ပွဲများစောင့်ရှောက်ဖို့ငါ့ကိုစိတ်အား. ဒါဟာသင့်ရဲ့သီချင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုပါပြီမပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တကယ့်အကြှနျုပျကိုကူညီပေးခဲ့တယ်. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
ဒါဝိဒ်သည် • ဒီဇင်ဘာလ 25, 2014 တွင် 3:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
စာသားတွေကိုခရီးစဉ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ;) ဂရိတ်သီချင်း!
Jaret • မတ်လ 5, 2015 တွင် 1:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်အံ့သြဖွယ်သီချင်းဖြစ်ပါတယ်. ထထွက်လာမယ့်ခဲ့သည်ညာဘက်အဖြစ်, ကျွန်တော့်ဇနီးက MS ရောဂါခံခဲ့သည် လာ. ,. သူမတို့၏စကားကိုအသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်းသီချင်းနေဆဲကျွန်တော်တို့ကိုတက် chokes. အမှန်ဆိုသည်ကား, ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, ကြှနျုပျတို့သခင်ဘုရား၌ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံရှိသည်သတိရအဖြစ်နှင့်ကျွန်တော်ထပ်ခါထပ်ခါထိုသီချင်းကိုနားထောင်နိုင်သည်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ခရီးစဉ်ကို, သူဟာသင်တို့အဘို့ရှိပါတယ်အားလုံးလမ်းအမှန်တရားဟောပွောခွငျးအတှကျ. သင်သည်သင်၏သီချင်းတွေကိုဤမျှလောက်များစွာသောအဓိပ်ပာယျအရာကိုနားလည်ဘယ်တော့မှစေခြင်းငှါ, ကျွန်တော်တို့ကိုအပါအဝင်, နှစ်ပေါင်းများစွာသူသင်ပြပါလိမ့်မယ်သောအခါဘုနျးကွီးသောနေ့တိုငျအောငျ. အပေါ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, အစ်ကို!
mike • ဇန္နဝါရီလ 1, 2016 တွင် 11:24 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီသီခငျြးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစကားကိုနားထောငျ,ဘုရားသခငျသညျသငျသညျခရီးစဉ်ကောင်းကြီးပေး, နှင့်ဤသီချင်းစာသားပို့စ်တင်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်…ကိုယ့်တဦးတည်းအသေးအဖှဲမှတ်ချက်, ချိတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်,…မြေမှုန့်ထဲကနေအရုဏ်သည်အထိ…ငါကအရုဏ်သည်အထိမိုဃ်းမလင်းမှီ beFrom သင့်တယ်ထင်ပါတယ်. မှန်သော?:)
luckysmith • စက်တင်ဘာလ 12, 2018 တွင် 8:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသူကားငါ၏အကြိုက်ဆုံးခရီးစဉ် lee သီချင်းတွေကိုတစ်ခုဖြစ်သည်